Egypta: nanjavona ny bilaogera iray raha mbola voatazona any am-ponja ny iray hafa na dia teo aza ny didin’ny fitsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2019 4:10 GMT
Bilaogera Egyptiana Nanjavona!
Nanjavona nanomboka ny Zoma 21 Novambra 2008 ilay bilaogera Mohammad Adel izay mitantana ny bilaogy Maeit (efa maty! ). Araka ny notaterin'i Wael Abbas tao amin'ny Twitter, voalaza fa hihaona amin'ny mpanao gazety Amerikanina iray mba hanatontosa antsafa i Adel saingy tsy nipoitra izy.
Tao amin'ny bilaoginy, namoaka ny lahatsoratra iray nitatitra fa niditra an-keriny tao an-tranon'i Mohamed Adel ny maraina mialoha ny niposahan'ny masoandro ny mpitandro ny filaminana Egyptiana ny Zoma, nikaroka ny tao an-trano, ary naka ny bokiny sy ny kapila CD-ny maromaro.
Tsara ny manamarika fa mpikambana ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana i Mohammad ary feno sora-baventy ny pejin'ny tranonkalany izay mitaky ny fahafahana ireo Mpirahalahy voafonja. Ankoatra izay dia nanome vaovao tsy tapaka ho an'ny mpamakiny momba an'i Gaza izy.
Namoaka fanambarana avy amin'i Adel Fahmi (rain'i Mohamed) ny Ikhwanweb, ilay tranonkalan'ny Mpirahalahy Miozolomana ofisialy amin'ny teny Anglisy:
Tao amin'ny fanambarany ho an'ny Ikhwanweb, nitatitra i Adel Fahmi fa nosamborina noho ny fiampangana namboamboarina no nahatonga ny fanjavonan'ny zanany. Niditra an-keriny tao an-tranon'i Mohamed ihany koa ny mpitandro ny filaminana iray volana lasa izay noho ny fandraisany anjara tamin'ny Fanentanana Manohitra ny Fanafihana an'i Gaza.
Nisy ny hetsi-panoherana nataon'ny tanora mpikatroka ara-politika, niaraka tamin'ny fanatrehan'ny rain'ilay bilaogera tsy hita popoka teo anoloan'ny biraon'ny Mpampanoa Lalàna Jeneraly amin'ny fanjavonan'i Adel. Nilaza i Adel Fahmi fa mirehareha amin'ny zanany izy, ary niantso ny famotsorana azy tsy misy hatak'andro. Efa nosamborina indroa ny toniandahatsoratry ny bilaogy Meit teo aloha ary indray mandeha tamin'ny taona 2006, nandritra ny hetsi-panoherana nitakiana ny fahaleovantena bebe kokoa ho an'ny fitsarana, ary tamin'ny volana Mey 2008 kosa ny faharoa, raha niantso fitokonana faobe ireo mpikatroka amin'ny aterineto.
Nahafantatra ny vaovao tamin'ny alàlan'ny tambajotran'ny finday Jakiu ny tontolon'ny bilaogy Egyptiana ary nihetsika avy hatrany. Namoaka lahatsoratra momba ilay raharaha ny bilaogy Zeinobia sy 3arabawy (amin'ny teny Anglisy), ary maro ireo bilaogera sy mpisera Facebook no nanoratra fanamarihana milaza tamin'ny namany momba ny fanjavonan'i Adel taty aoriana.
Mbola any am-pigadrana ilay bilaogera Egyptiana na dia nahazo fahafahana vonjimaika aza
Mbola any am-ponja ilay bilaogera Mohamed Khairi na dia efa nahazo fahafahana vonjimaika aza izy andro vitsy lasa izay. Nosamborina ny marainan'ny 17 Novambra 2008 tao an-tranony tao Fayoum ao amin'ny vinanin'i Neily ity bilaogera Egyptiana ity izay nanoratra tao amin'ny bilaogy “Jarr Shakal” ( mananihany).
Mpianatra ao amin'ny sampana injeniera ao amin'ny Oniversiten'i Kairo i Khairy, ary efa nosamborina izy teo aloha. Nosamborina voalohany tamin'ny 22 Oktobra 2008 i Mohamed Khairi noho ny fandraisany anjara tamin'ny fanentanana nataon'ny vahoaka hanesorana ny fanaovana fahirano an'i Gaza, saingy noafahana izy taorian'ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana tao Fayoum hanagadra azy nandritra ny 15 andro. Nosamborina indroa izy tao anatin'ny iray volana latsaka.
Nitaky ny manampahefana Egyptiana ny ONG=FTMF Sakaizan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Maha-olombelona (ONG) mba hamotsotra ilay Egyptiana bilaogera mpikatroka nandritra ny fisamborana azy tamin'ny alàlan'ny fanamafisana fa niharan'ny fandrahonana maro izy toy ny fanakanana ny fitsidihana azy, ny fitazonana azy mitoka-monina tao anaty lakalin'ny fonja, ny fanapahana ny herinaratra tao anatin'izany lakaly nisy azy izany ary ny fanomezana sakafo azy indray mandeha monja mandritra ny tontolo andro. Toy izao ny fanambarana navoakan'ny fikambanana:
Tamin'ny fotoana farany nangatahan'ny mpanao fanadihadiana avy ao amin'ny Fiarovam-panjakana an'i Khairy mba hanakatonany ny blaoginy dia norahonana izy fa ho samborina indray raha tsy nampihatra izay notakiana taminy. Nalaina ny solosainy enti-tanana nandritra ny fisamborana azy farany ary tsy naverina taminy.